UAgatha Christie: umdla wokubhala wencwadi yeNkosikazi enkulu yoLwaphulo-mthetho. | Uncwadi lwangoku
UAgatha Christie: Imidlalo yakhe yeyesithathu ethengiswa kakhulu embalini, ngasemva kweBhayibhile noShakespeare.
Imisebenzi ka-Agatha Christie ithengisile iikopi ezingaphezu kwamawaka amabini ezigidi , Ndimi kwi Indawo yesithathu yeencwadi ezithengisa kakhulu emhlabeni, kuphela ngasemva yemisebenzi Isuka kuShakespeare kunye neBhayibhile.
Negritos ezilishumi Yeyona noveli ethengwa kakhulu ethengiswa ngalo lonke ixesha kunye nenye yeenoveli zakhe, Ukubulawa kukaRoger Ackroyd, wavotelwa eyona ncwadana yolwaphulo-mthetho ilungileyo ngalo lonke ixesha ngumbutho wabalobi bolwaphulo-mthetho..
1 Ukuqala kuncwadi:
2 Ukunyaniseka kweploti:
3 Umsebenzi obanzi woncwadi:
4 UAgatha Christie kunye nabalinganiswa bakhe:
Umntu wokuqala u-Agatha Christie wadala nguPoirot, umcuphi wakhe odumileyo, kwaye wayenza kwinoveli yakhe yokuqala, Ityala eliyimfihlakalo leZimboKodwa neNkosikazi enkulu yoLwaphulo-mthetho ayizange iqale ngokulula kwihlabathi elinobunzima: abavakalisi abathandathu bayala le noveli. Xa wabafumana ukuba babhejele kuye, babeka enye yeemeko ezonakalisa kakhulu umbhali: ukuba aguqule isiphelo.
Abagxeki bamnika enye yekalika kunye nesanti:
"Esona siphene kweli bali kukuba phantse sikrelekrele kakhulu."
Era ibali lokuqala lomcuphi apho umfundi ebengenakukwazi ukufumana isaphuli-mthetho
Amava akhe njengomongikazi nanjengomncedisi wekhemesti wamnika ulwazi malunga neziyobisi kunye neetyhefu ukuba uyisebenzisile kwinoveli yakhe. Ubuchule bakhe kulo mbandela babuphezulu kangangokuba inkcazo yetyhefu ye-thallium, ayenzayo Imfihlelo yeHashe Eliphaphathekile (1961) ichanekile ngendlela emangalisayo Uncede ukusombulula imeko yezonyango nto leyo yayixakile kwiingcali.
Olunye lweempawu eziphambili zeenoveli zika-Agatha Christie yile ishiya imikhondo eyaneleyo kuzo zonke izahluko ukuze umfundi afumane umbulali ngaphambi kokuphela. Obu buchule bokubhala okanye amava abizwa whodunit (de Ngubani owenzayo?).
Umsebenzi obanzi woncwadi:
UAgatha Christie uthumele Iinoveli ezingama-66 zomcuphi Ukongeza kwimidlalo, iinoveli zothando ezintandathu, amabali amafutshane, iimbali ezimbini, kunye neencwadi ezimbini zemibongo.
Ukudlala kwakhe Umzila weendlela Ngowona mboniso mde emhlabeni.
Las Iinoveli ezintandathu zothando wazipapasha phantsi kwegama elinguMary Westmacott.
I-Poirot, umlinganiswa othandwayo esidlangalaleni, owathi umdali wakhe wamfumana "engenakuchazeka."
UAgatha Christie kunye nabalinganiswa bakhe:
Iminyaka engamashumi amabini kuphela emva kokudala I-Poirot, wavuma kwidayari yakhe ukuba uyifumene "ayinyamezeleki". Ngaphandle koku, wazinikezela kubafundi bakhe kwaye waqhubeka nokubhala iinoveli kunye nePoirot njenge-protagonist ngaphandle kokuhlisa iota yabo esemgangathweni. Uqhubeke iminyaka engamashumi amathathu ngaphezulu ngenkwenkwezi yakhe, enempumelelo enjalo I-Poirot ngumlinganiswa oyintsomi kuphela onokuba nobomi bakhe. KwiNew York Times emva kokubonakala kwakhe kokugqibela (Ikhethini, 1975)
Abalinganiswa bayo abakhulu abazihlangananga. EJamas UPoirot kunye no-Miss Marple badibana kwinoveli efanayo.
"Ndiqinisekile ukuba bebengathandi ukudibana"
watsho kanye, kwaye ukuba siyayicinga, wayenyanisile. Babengengobantu babini babenzelwe ukuba baphile.
Ngayiphi na imeko, ngokudibeneyo okanye ngokwahlukeneyo, kufanelekile ukuphinda ufunde enye yeendawo zabo, ngaphandle kokutyeshela abo banenkwenkwezi uTommy kunye noTuppence, iParker Pine okanye abalinganiswa abaphila kuphela ebalini, njengomntu ophambili kwenye yeenoveli zam endizithandayo, Ubusuku obungunaPhakade.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UAgatha Christie: umdla wokubhala wencwadi yeNkosikazi enkulu yoLwaphulo-mthetho.
ULouisa May Alcott. Amabali amaninzi ngakumbi kunabafazi abancinci